Faaqidaadda Toddobaadka, 30 September 2019
Isniin 30 September 2019
Faaqidaadda: Xiisadda federaalka iyo Jubaland
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay go’aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xayiraad duulimaad ku saartay Jubaland iyo wax aka dhalan kara. Waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Faaqidaadda: Xaaladda xuquuqda caruurta Soomaaliya
Faaqidaadda: Nooca doorashada xigta ee Soomaaliya
Faaqidaadda: Xaaladda maamulka Galmudug
Barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu maanta ku saabsan yahay xaaladda maamulka Galmudug, halkaasi oo magaalada Dhuusomareeb uu ka furmay shir dib u heshiisiin oo maamul cusub loogu dhisayo Galmudug. Waxaa soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan.
Faaqidaadda: Go'aanka Golaha Ammaanka ee Qaraarka 1267
Faaqidaadda: Doorashooyinkii ka dhacay Jubaland
Barnaamijka Faaqidaadda waxa uu ku saabsan yahay khilaafka siyaasadeed ee Jubaland, halkaasi oo shalay laba doorasho oo ka dhacay madaxweynayaasha Jubaland loogu kala doortay Axmed Maxmed Islaam (Axmed Madoobe) iyo xildhibaan Cabdirashiid Xidig.
Faaqidaadda: Dib-u-dhacyada doorashooyinka Somaliland
Faaqidaadda: Xiisadda doorashada Jubbaland
Faaqidaadda: Farogelinta dalalka Khaliijka ee Soomaaliya
Faaqidaadda: Xaaladda amniga Muqdisho
Faaqidaadda: Caqabadaha ku gudban ka hortagga qaraxyada
Ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxa soo diyaarisay soona jeedineysa Sahra Ciidle Nuur.
Faaqidaadda: Sida ay Kooxda xag-jirka u qortaan dhalinyarada
Barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka Waxaad ku maqli doontaan Asbuucaan, Ururadda Xagjirka ah iyo waxaa u sahla in ay qortaan dhalinyarada yar yar.